एप्पलको आफ्नै अडियो ज्याक प्याटेन्ट | म म्याकबाट हुँ
भविष्यको हेडफोन ज्याकको सम्बन्धमा नयाँ एप्पल प्याटेन्टको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ?
पेड्रो रोडस | | एप्पल, आईप्याड, आईफोन, हाम्रो बारेमा
Appleinsider बाट हामी Cupertino द्वारा प्रस्तुत नयाँ प्याटेन्ट सम्बन्धित एक समाचार प्राप्त गर्दछौं। यस प्याटेन्टले पातलो उपकरणहरू प्राप्त गर्न बाहेक अरू केहि खोजी गर्दैन जसका लागि तिनीहरूका उपकरणहरूको विभिन्न कनेक्शन पोर्टहरू बक्सहरूमा जानुपर्दछ। पहिले नै समय मा प्रसिद्ध कनेक्टर डक जुन अधिक केहि थिएन र दश बर्ष भन्दा कम भन्दा कम र पहिलो आइपड क्लासिक पछि सबैले हर्षित भए।
पछि, डक पोर्टलाई आधुनिक, धेरै पातलो र उल्ट्याउन लाइटनिंग पोर्टमा पुनः डिजाइन गरिएको थियो, मोबाइल उपकरणहरूलाई मोटाई र आकार घटाउन अनुमति दिँदै। यो पुनर्मिलित पोर्ट नयाँ पोर्ट द्वारा पछ्याइएको छ १२ इन्चको म्याकबुकको USB-C र अब यो अन्तमा अडियो ज्याक कनेक्टरको लागि समय हो।
हामीले अनुमान गरिसकेका छौं, एप्पलले आफ्नो नयाँ मोबाइल उपकरणहरू र यसको अल्ट्रा-पातलो ल्यापटप दुबैको लागि जीवनभरको अडियो ज्याकको भविष्य के हुन सक्छ भनेर पेटन्ट गरेको छ। यो स्पष्ट छ कि यदि यो अवस्था आयो भने हामी एउटा त्यस्तो सम्बन्धको सामना गर्दैछौं जुन अन्य निर्माताहरूलाई वा एप्पल हेडफोनहरूको लागि आफ्नै जडान अघि विस्तार गर्न सकिन्छ।
यो नयाँ प्लग हालको अवस्थित एकको परिमार्जन हो जुन हामी सबैलाई थाहा छ, यसको अक्षको वरिपरि घुमाउन सकिन्छ किनकि यो क्रान्तिको सममित छ। एप्पलको शर्त, हामीले संलग्न गरेका छविहरूमा देखाइएको छ, "कट" ज्याक प्लगको शरीरको प्रतिशत प्रतिशत डी आकार छाड्दै जुन यसलाई घुमाउन अनुमति दिँदैन, प्रयोगको स्थिति राखेर।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » आईप्याड » भविष्यको हेडफोन ज्याकको सम्बन्धमा नयाँ एप्पल प्याटेन्टको बारेमा तपाई के सोच्नुहुन्छ?
हेरौं जब प्याटेन्ट हुन्छ कि केबलहरू छल्दैनन् ...
Cesar लाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलको पहिलो बेकार पेटन्ट ... ठिकै छ, त्यहाँ केहि धेरै छन्, तर यसले केक लिन्छ।
यसले ज्याकसँग अनुकूलता हराउँछ, त्यसैले केवल एप्पल हेडफोन मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले घुमाउन सक्ने फाइदा हराउँछ, यसैले यो स्थिर रहन्छ, लीभरले बिच्छेद गर्न सक्षम हुँदै।
यसको लागि अडियोको लागि एक लाइटनाइट सिर्जना गर्न, यो चापल, वा Htc को आविष्कारहरू जस्तै, USB कनेक्टरमा हुनेछ।
फ्ल्यासलाई जवाफ दिनुहोस्
ग्लोबेट्रोटर 65 भन्यो
पक्कै। जब त्यहाँ बजारमा एप्पल हेडफोनको विकल्पहरू छन्, उदाहरण: सोनी MDR-EX38 (मसँग भएका) धेरै सस्तो, उत्तम गुणवत्ता मूल्य।
होईन जस्तो यी चीजहरूको लागि चेकआउट गर्नुहोस्।
Trotamundo65 लाई जवाफ दिनुहोस्
एप्पलको नयाँ टाइपफेस, स्यान फ्रान्सिस्कोको रहस्य
यो नयाँ एप्पल टिभीको भित्री भाग हो